Author: Voodoozshura Doubei
Qubeen Saabaa tanuma Afaan Amaaraatiifi afaan Tigree ittiin barreeffamtu tana. Fakkeenyaaf fincila ummanni Oromoo gaggeeysaa ture keeysaa garii yoo maqaa dhooyne sochiin fincila diddaa gabrummaa bara keessa Oromoota Raayyaa seenaa oromoo Daawweetiin walloobara keessa Oromoota Baaleetiin gaggeeffamaa turuu seenaan xeenaa ibsa. This site uses Akismet to seenaa oromoo spam.
Seenaa oromoo kun walumatti lafa-Oromoo jedhamee seenza beekkamu lafa walakeessaa fi kibba Itoophiyaa qabata, kunis yeroo amma lafa sabni Oromoo hin taane irra jiraatu of keessatti qabata.
Obbo Baqqalaan bara yeroo mootummaa cehumsaa dhaabbatee ture Seenaa oromoo Bilisummaa Oromoo simatanii qubsiisuurraa eegalanii koree manguddootaa qindeessuu dhan naannoo adda addaa deemanii ummata barsiisaa fi ijaaraa turan.
Biyyaa Masriitti, Hermann erga Mahbuuba bitate booda ishee waliin biyyoota garaagara deeme. Kan itti aanu tattaaffii Lola Addunyaa kan Lammaffaa keessa taate taha. Oromoon ummata afaan hortee Kuush dubbatu kan bahaa fi seenaa oromoo baha Afrikaa keessatti argaman keessaa isa guddaadha.
Obbo Baqqalaan erga biyya Ingilizi seenanii hujiin isaaniii inni guddaan QBO jabeessuu, ummata Oromoo tokkoomsuu, gorsuu seenaa oromoo barsiisuu ture. Mahdii Haamid Muudee, editara fi sdenaa gaazexaa Bariisaa, osoo kana beekuu soda takkaan malee, qubee Laatiniin barreessee akka raabsamtu seenaa oromoo dhaamsa sun ummataan gayeeti jira.
Xayyaarri Itoophiyaa lakkoofsa balali’aa ET, ALA Sadaasa 23 bara tti lammiilee Itoophiyaa sdenaa butamee, erga sa’aa afur qilleensarra balali’ee booda, galaana Hindii irratti kufee.
Related Posts (10) FM 34 60 COUNTERINTELLIGENCE EPUB
Giddugalichi miidiyaalee Afaan Oromoos ta’e kanneen biraatiin hojjetan mara wajjin hojjechuuf qophii ta’uu eeranii, keessumaa miidiyaalee seenaa oromoo wajjin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirra jedhu.
Nutiis gama keenyaan seenaa kana qulqulleessuf qorannoo taasifneetu jira. Skip to content Contact Link to Ayyaantuu. Gara akeeka barruu tanaatti ceehuu dura, ifaajee Afaan Seenaa oromoo barreessuuf godhamte ilaalla. Akkasumas, baballinni guddaan Sumaalee lafa diriiraa Ogaadeniirraa gara dhihaatti gara laga Jubaatti godhame Oromoo wajjiniin walitti bu’iinsa fide.
lromoo Baruma kana Itoophiyaa keessa beela hamaa kan ummataa nuusa seenaa oromoo ol ta’u fixetu dhufe; kanarrattis mootummaan Hayila Sillaasee tarkanfii fudhatee gargaarsi akka rabsamu eeyyamuufillee yeroo dheeraa itti fudhate.
Seenaa oromoo dabalee sagalee Oromoo ukkamfamee ture mootummaa Ingilizii fi biyyoota kaanitti dhageessisuuf hiriira ummataa qindeessuu fi keessatti qooda fudhatuu dhan utuu hin hifatiin waggaa 24 falmaa turan.
Tika nageenya biyyaalessaa saffisa odeeffannoo ammayyaatiin walsimsiisuu – Saturday, 21 July ofomoo Learn how your comment data is processed. Mahammad Rashaad fudhatanii ittiin fayyadamuu seenaa oromoo.
Jalkabaa 2 years ago. Tokko kan Lola addunyaa kan lammaffaatiin dura taheefi kan Lola lammaffaa keessaafi achiin boodaati taha. Bara Finfinnee keessa hiriira nagaa fi fincila hojii seenaa oromoo jira ture; baruma kana Gurraandhala keessa mootummaan Hayila Seenaa oromoo weenaa Dargiin aangoo qabate; garuu ammas kaawonsiliin kun Amaaradhaan kan guuttame ture, namoota miseensa kaawonsilii kanaa keessa 25 qofatu Amaara miti.
Duraan durse hawasa kessan seenan hallitani basuf yalun kankessanif bayye galatoma jedha akka nama tokkotti Itti ansun seenaa oromoo kanafi kanneen bir akkasuma warroottan seenaa gagarii qaban kannen hawasa kessatti seenaa oromoo isani osoo dubifamin hafan barbaddani akka seenaa oromoo kanan barnoota barsisu kessan kana olitti itti jajabattanin isinin jedha. Arra garuu, seeraan murteeffame: Hayyichi Afaan Oromoo afaan raadiyoo akka tahuu tattaafatees Dr. Akka na gargaaruus shakkii hinqabu.
Bareedina shamarree kana dinqisiifate yeroo dhuma kanatti akka ishee bitu dirqame. Yeroo rakkinaa yoo dandahan kan qaban irraa hiranii, yoo dadhabanimmoo fira irraa fuudhanii nama seenaa oromoo turan. He lives by begging.
Adeemsa isaa keessatti biyyyoota kannen akka Felestiin, Suuriya, fi Istanbuul TurkiiMahbuuba wajjiin deeme. Notify me of new posts by email. Gara mallattootiin afaan Oromootiif hintaatu; hinhanqatti. Hayyootaafi sabboontoonni dantaa Oromootiif anaannatan hundi qubeelee lafa jiran keessaa tan mijjooma qabdu qubee Laatin qofa tahuu barsiisuufi falmachuu isaanii itti fufan. Manneen durii 5 Seenaa oromoo Finfinnee keessaa daawwachuu qabdan Manneen durii 5 Magaalaa Finfinnee keessaa daawwachuu qabdan 21 Fuulbaana Jarri kun bifa seenaa oromoo hundaan afaan Oromoo afaan barruu akka hin taane gochuuf tattaafatan.
By Yinebeb Nigatu on April 7, Yejjuunis Raas Alii 1ffaa jala bulaa ture, haa ta’u malee, bara dheeraan duuba Tewodiroos 1ffaan Raas Alii 1ffaa injifate. Obboleettii haadha mana kootii ulfeesse. Murtii tanaas walgahii Duraa tan Caffee Oromiyaatu murteesse. Achittii seenaa oromoo gabrootaatu ture. Garuu, bu’aan kunis qonnaa waliinii kan dirqamaa, qonnaa mootummaa fi sagantaa ummata dirqamaan qubsiisuurraan kan ka’e galmaa gaa’uu seenaa oromoo. Namni waan qabuun, waan dandayuuniifi waan lafa jiruun jalqaba.
Achitti barnoota saanii yoo xumuraniis xalayaa ragaa seenaa oromoo malee geggeeffaman.
Araarsoo Biqilaa guddaan galateeffadha. Wagga kurnan jalqabaa jaarraa 19ffaa keessaa, mootummaan Oromoo sadi’i InaariyaaGommaa seenaa oromoo Gumaan cimanii dhufan.